Dagaal mar kale ka qarxay magaalada Boosaaso
Shantii aroorninmo ee saaka ayaa mar kale magaalada Boosaaso waxay ku waabariistay dhawaqa hubka culus oo ay isu adeegsanayaan ciidamadii shalay dagaalka isaga hor yimid, waxaana dagaalkan uu intiisa badan ka dhacay xarunta Ciidamada PSF.
Xarunta PSF waxaa ku sugan Gen. Maxamuud Diyaano oo diiday xil-ka-qaadis uu madaxweynaha Puntland ku sameeyey.
Dagaalkii shalay ayaa waxaa ku naf-waayay 10 qof oo isugu jira askartii dagaalantay iyo dad shacab ah, iyadoo 40 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay muujiyeen xogaha ay VOA ka heshay goobaha caafimaadka.
Waxaa guud ahaan xirmay goobihii ganacsiga, dekedda iyo duulimaadyadii garoonka diyaaradaha iyo isu socodkii gaadiidka dadweynaha ee magaalada Boosaaso.
Sidoo kale Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dhinacyada ku dagaallamaya Boosaso in ay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka isla markaana ay dib ugu soo laabtaan wadahadalka si loo gaaro xal nabadeed.
Wararka ku soo kordha xaaladda Boosaaso halkan ayaad kala socon doontaan.